SBS Language | ‘काइतेन’: तामाङ समुदायले राणाकालीन नेपालमा भोग्नुपरेको उत्पीडन र शोषणको चित्रण
Source: Subas Tamang
काठमान्डु ललितकला क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका सुवास तामाङले आजसम्म नेपाल लगायत बङ्गलादेश तथा भारत समेत गरेर धेरै कला प्रदर्शनीमा भाग लिइसकेका छन्। हाल बबरमहलस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा उनको प्रथम एकल कला प्रदर्शनी भइरहेको छ जुन सेप्टेम्बर २८ सम्म चल्नेछ।उनको प्रदर्शनीमा राणाकालीन समयमा तामाङ समुदायप्रति गरिएको अन्यायको चित्रण गर्न खोजिएको छ।गिरीश सुवेदीको रिपोर्ट।
कोरोना महामारीको समयमा नेपालको कला क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको छ?
मेरो यो प्रदर्शनी नै कोरोना महामारी हुनुभन्दा अगाडि सुरु हुनु पर्ने थियो। तर कोभिडले गर्दा सर्दै-सर्दै यो समयसम्म आइपुगेको हो। यस्तै कारणले धेरै वटा प्रदर्शनीहरू समयमै हुन पाई राखेको छैन। यो एउटा समस्या भई राखेको छ। मेरो प्रदर्शनीमा पनि दर्शकहरू भौतिक दुरी राखेर आइदिनुभएको त छ, तर महामारी अगावैकोजस्तो धेरै जना देखिनु हुँदैन।
यो समयको अवस्थाको सन्दर्भ तपाईँको अहिले प्रदर्शनीमा रहेका कलाकृतिमा कतिको देखा पर्छन्?
अहिलेको कोभिडको सन्दर्भ मेरो प्रदर्शनीको कलाकृतिमा प्रत्यक्ष त छैनन्। तर यो तामाङ समुदायको पहिचानसँग सम्बन्धित रहेको छ।
तामाङसँगको कुराकानी सहितको हाम्रो रिपोर्ट सुन्नुहोस्:
तपाई आफूलाई कस्तो कलाकारको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ?
म एक एकल अभ्यास गर्ने कलाकार हुँ। यस बाहेक म र मेरा ५ जना साथीहरूको ‘आर्ट-ट्री’ नामको समूह छ, जसमा हामी सबै जना फरक जनजाति समुदायका हौँ। हामी सबै मिलेर संयुक्त कलाको अभ्यास तथा व्यक्तिगत कलामा पनि व्यस्त हुने गर्छौँ। हाम्रो कामहरूको विषयवस्तु धेरैजसो समाज र राजनीति तथा यीसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरूमा आधारित हुने गर्छन्। कला मनोरञ्जनको साधक मात्र नभएर समाजमा भएका विभिन्न विसङ्गति र मामिलाहरूको विषयमा बहस गर्ने माध्यम पनि हो भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। तसर्थ आफूलाई म यस्तै सान्दर्भिक विषयहरूमा काम गर्न मन लाग्ने कलाकारको रूपमा चिनाउन रुचाउँछु।
तपाईँको यस प्रदर्शनीमा कस्ता-कस्ता विषयमा कलाकृतिहरू आधारित छन्?
यो प्रदर्शनीको शीर्षक ‘काइतेन’ – हिस्ट्री, मेमोरी एण्ड आइडेन्टेटी (इतिहास, सम्झना र पहिचान) रहेको छ। मेरा कलाकृतिहरू तामाङ समुदायका इतिहास, स्मृति र पहिचानका कुरामा आधारित छन्। यी सन्दर्भ झल्कने कामहरू गरेको छु यस पटक। यसमा मेरा कामहरू राणा शासनको समयमा मेरो समुदायले भोग्नुपरेको उत्पीडन र शोषणसँग आधारित छ।
कलाकृतिमा रङको प्रयोग कसरी गर्नुभएको छ र कुन पद्धतिमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ?
मैले स्नातकोत्तर तह नै ‘प्रिन्टमेकिङ’ माथि गरेको थिएँ। त्यसैले यस प्रदर्शनीमा धेरै कलाकृतिहरू यस विषयमा आधारित रहेका छन्। यस सँग-सँगै ‘पेन एण्ड इन्क’ तथा प्रिन्टमेकिङको अन्य पद्धतिहरू पनि प्रयोगमा ल्याएको छु। मैले भन्न खोजेको कुरा जसरी सहज तरिकाले दर्शकले बुझ्न सक्छन्, त्यस अनुसारको उचित पद्धतिलाई नै मैले अपनाएर फरक कलाकृतिहरू बनाएको छु।
तपाईँको बिचारमा यस्तो महामारी तथा यसको जारी नियन्त्रणबिच नेपालको कला क्षेत्र कसरी अगाडी बढ्छ होला?
अहिलेको समयमा धेरै प्रदर्शनीहरू भइरहेका त छैनन्, तर कतिपय दर्शकहरू आफ्नो इच्छा अनुसार कला हेर्नको निम्ति आइदिनु पनि भएको छ। अहिले धेरैजसो प्रदर्शनीहरू अनलाइन भर्चुअल टुर को रूपमा पनि देखाइने गरिन्छ र मेरो यस प्रदर्शनी पनि त्यस प्रक्रियाद्वारा हेर्न सकिन्छ। यो महामारीको कारणले सायद यस प्रविधिको पनि भविष्यमा अझ बढी विकाश हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसको कारण अहिले पनि कति जना दर्शकहरू फोन गरेर खाली भएको समयमा हेर्न आउनुहुन्छ। सायद यस क्षेत्र भविष्यमा केही समयसम्म यसरी नै चलिरहन्छ जस्तो लाग्छ।
कर्णालीका चित्रकला काठमाण्डुमा
‘गोली र अन्नले दमन अनि त्यसपछिको नयाँ जीवनको झलक दिन्छ’
धन तामाङ: लाट्टे आर्ट चाम्पियनको रंगीन कथा
नेपाली लेबर मात्र बन्नुपर्छ भन्ने छैन, लिडर पनि बन्नुपर्छ: डा. चिन्तामणि योगी
न्युड आर्टलाई बुझ्ने तरिका गलत छ: क्युरेटर रोशन मिश्र
"स्ट्रीट आर्ट" को पहिलो नेपाली पुस्ता